China P02 5 IN 1 USB C HUB ye iPad Pro ine HDMII, 100 W PD, USB2.0, USB3.0, 3.5mm Jack fekitori nevatengesi | Huachuang Electronic
P02 5 IN 1 USB C HUB ye iPad Pro ine HDMII, 100 W PD, USB2.0, USB3.0, 3.5mm Jack
Chigadzirwa Chigadzirwa: 5 Mu 1 Type-C HUB Ye iPad Pro
Zviteshi: Type C To PD 100W + 4K HDMI + USB2.0 + USB 3.0 + 3.5mm Jack
Kukura: 96 * 29 * 10 mm
Chinyorwa: Aluminium kesi + PC
3, 【Kashanu-mu-imwe USB C Hub】 Unganidza kuPed Pro Pro pamwe neportport USB-C hub inoratidzira USB C yekuchaja chiteshi nekutakura magetsi, 4K HDMI port, An 3.5mm Audio / mic 2-in-1 jack uye USB 2.0 port, 1 USB 3.0 maDoko anokubvumira kuti ubatanidze keyboard, mbeva, USB mutyairi, wekunze Disiki kune iPad pro.
4, 【Simba Dhirivhari】 USB Type C hub inopomera yako iPad Pro apo ichibatanidza 100W simba rekutumira port. Iye zvino mamwe akawanda mishini uye iyo yakanyanya kutsva iPad Pro kutsigira PD. Nekutumirwa kwemagetsi, chiteshi chimwechete che USB-C chinogona kukupa Blazing-nekukurumidza kuchaja chiitiko. Zvakakwana pindirana iyo Pro Pro.
5, 【Yakajeka 3D Mhedzisiro Vhidhiyo Sync】 HDMI Tsigiro inosvika 3840 * 2160 @ 30Hz resolution zvichiteerana. Iwe unogona kunakidzwa yakajeka 3D mhedzisiro vhidhiyo mune yakakwirira-resolution kubva kune yako Pro Pro kune yekunze tarisa. HDMI port inotsigira hombe screen LCD TV kana kuratidza inoenderana ne 4K Max kubuda. Ipa iwe yakajeka 3D maitiro vhidhiyo Sync.
6, 【Yakagadzika Dhata Yekutamisa】. 1 USB 2.0 maDoko ane 480Mbps danho rekushandura dhata uye 4.5W (5V / 900mA) Kubuda kweMagetsi. 1 USB 3.0 maDoko ane 5Gbps danho rekushandura dhata uye 4.5W (5V / 900mA) Kubuda kweMagetsi.
7, 【Stylish Dhizaini, Premium Vaka uye Bhodhi Kuenderana】 Yakatsetseka uye yakakwenenzverwa yakarongedzwa ndege giredhi realumini yakavharirwa inoita kuti ive iyo yakakwanira yako Pro kutaridzika uye kunzwa muNew space Grey. Iyo yakakodzera USB-C yekuwedzera hub yeApple Ipad Pro.
1 * USB 3.0 Chiteshi
1 * USB 2.0 Chikepe
Dhipatimendi rekufambisa inomhanyisa kusvika 480Mbps, Upamhi hwesimba remagetsi rinosvika 5V / 900mAh
Yepfuura: H19 11 IN 1 Dual HDMI USB C HUB ine 2 x HDMI, PD 100W, Ethernet, VGA, 3 x USB 3.0, SD, TF, 3.5mm Jack
Inotevera: S09P 3 IN 1 Type C Adapter ine 4K HDMI, PD100W, USB 3.0
apuro usb c hub
usac usb c hub
usb c hub inonzwika
D19 11 IN 1 Dual HDMI USB C HUB ine 2 x HDMI, ...
H19 11 IN 1 Dual HDMI USB C HUB ine 2 x HDMI, ...